Sajhasabal.com | Homeप्रचण्ड-माधव समूहले तोक्यो जिल्ला अध्यक्ष र सचिव,कुन जिल्लामा को ? (नामावली सहित )
प्रचण्ड-माधव समूहले तोक्यो जिल्ला अध्यक्ष र सचिव,कुन जिल्लामा को ? (नामावली सहित )
फागुन १०, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)प्रचण्ड-नेपाल समूहले ६८ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको पद टुंगो लगाएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन परेपछि राजनीतिक रुपले नेकपा दुई भागमा विभाजित छ ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल समूह एकातिर छन् भने,ओली अर्को समूहतिर छन् । सोहि अनुसार प्रचण्ड-नेपाल समूहले सोमबार जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । ९ जिल्लामा भने अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
गत माघ १ र २ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार दिएअनुसार जिम्मेवारी दिइएको उक्त समूहले जनाएको छ । यसअघि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ९ बुँदे मापदण्ड बनाएर बराबर हैसियतमा संगठनमा नेतृत्व लिने सहमति गरेका थिए ।